Iincwadana ezi-7 zenoveli emnyama ezilinde ihlobo | Uncwadi lwangoku
Iincwadana ezi-7 zenoveli yolwaphulo-mthetho ezilinde ihlobo
A ihlobo elixineneyo lobushushu, ubushushu kunye nolwandle, intaba okanye inzolo ekhaya. Kodwa ngokuqinisekileyo kuya kubakho incwadi kunye nokufunda okuncinci. Kulungile kubafundi abamnyama nako ke kuhamba ezinye iindaba yohlobo olumnyama.
Ukuqhubeka kwempumelelo yakutshanje enje nge UPaula hawkins o USandrone Dazieri. Isibini esinye isihloko somlilo udokotela IMontalbano nguCamilleri kunye nomhloli Uhlaziyo lweRankin. Okwesithathu kumcuphi Ityala de UDeon Meyer, kutshanje kukhankanywe umbhali woMzantsi Afrika Apha . Kwaye esinye isibini sezinto ezintsha, esinye esivela eGalician Xavier Quiroga kunye nomnye ovunyiweyo UDon uphumelele. Makhe sibone ukuba zivakala njani.
1 Urhwaphilizo lwamapolisa- uDon Winslow
2 Ukufa okubandayo-uIan Rankin
3 Icarus - UDeon Meyer
4 Indlwane yamarhamba - uAndrea Camilleri
5 Indlu yamaNazi - Xavier Quiroga
6 Kubhalwe emanzini - Paula Hawkins
7 Ingelosi - uSandrone Dazieri
Urhwaphilizo lwamapolisa -UDon Winslow
Kuthengiswa ngoJuni 22 inoveli entsha ekudala ilindelwe ngumphathi waseMelika UDon uphumeleleUmbhali odumileyo Amandla enja y Inqwelo. Isihloko esicacileyo esingashiyi mathandabuzo malunga noko kusilindeleyo.
UDenny Malone yaziwa kakhulu ISebe lamapolisa laseNew York kunye nenkokheli ye "Icandelo". Zizona zikrelekrele, ezona zinzima kunye nezona zimbi kwaye olonakeleyo. Kodwa kunjalo sele iza kufunyanwa kwaye iMalone kuya kufuneka ichaze kakuhle ukuba yeyiphi indlela efuna ukuyilandela, ngakumbi indlela yokuphila.
Ukufa okubandayo -Ian Rankin
Uphume nje Ityala lokugqibela lomhloli wezilwanyana waseScotland uJohn Rebus waya kwintengiso nge-25. Besisabethana kunye Izinja zasendle. Ngoku sibuyele kubusika obubanda kakhulu nobude e-Edinburgh kwaye uMhloli uRebus kuya kufuneka ajongane nothotho lwe ezingaqhelekanga ezingaziwayo ezikhokelela kuninzi amanqanaba aphezulu ezopolitikoEzo zingenakufikeleleka ukuze ubulungisa bufikelele kubo. Kodwa sithetha ngeRebus ...
Icarus -UDeon Meyer
Sele sifumene isihloko sesithathu somhloli waseMzantsi Afrika UBenny griessel. I ukufunyanwa komzimba ongcwatyelwe kwihlomela ledolophu yaseKapa phantse ngeKrisimesi iya kuba yityala elitsha leGriessel, elingahambi kwelona xesha lilungileyo.
Le noveli yakutshanje ibikhona ithathelwe ingqalelo olona luhlu lubalaseleyo, apho amashishini axubana khona online Ifashoni kakhulu malunga ne-alibis yokungathembeki, amathamsanqa amatsha kunye nokuhlamba okungcolileyo kweentsapho ezinkulu ezivelisa iwayini zedolophu. Kule nto kongezwa i Umzobo olungileyo wengqondo wabalinganiswa abaphambili kunye noluntu olujikeleze bona.
Indlwane yamarhamba - UAndrea Camilleri
Izavenge ezingamashumi amabini anesihlanu ukusuka kuthotho loMkomishinala UMontalbano kwaphakade ongunaphakade UAndrea Camilleri. Kwakhona sinokuyonwabela imeko ehlekisayo yomlinganiswa osele engaphezulu komzekelo wokwazi indlela yokuphila IMeditera. Ngeli xesha iMontalbano iya kufumanisa ukuba ukuvela kwesidumbu somgcini zincwadi obonakala ngathi uthule iya kuba lelinye lamatyala ngakumbi kwaye kunzima yomsebenzi wakhe.
Indlu yamaNazi - Xavier Quiroga
Esi sihloko sele Inqaku lokugqibela leGala do Libro Galego Award kunye nophumeleleyo UBhishophu Omkhulu weSan Clemente Award yenoveli ebalaseleyo. Ingqangi inomdla: ingxelo enezinto eziyinyani nezithelekelelweyo malunga Ukubhabha ngeGalicia, naphantsi kwentambo kaFranco, yamaNazi amaninzi emva kokuphela kweMfazwe yesibini yeHlabathi.
Umlinganiswa ophambili ngu Umqhubi weteksi onomphefumlo womcuphi kunye nomfundi omkhulu ngubani owamkela umyalelo wezopolitiko waseGalician kunye nosomashishini: ukutyhila ixesha elidlulileyo lamaNazi apho iintshaba zakhe zinokumxubusha naye.
Kubhalwe emanzini - UPaula Hawkins
Buyela UPaula hawkins emva Intombazana kuloliwe. Entsha imfihlakalo phakathi koodade ababini, UNel noJules Abbott. Kwiintsuku ezimbalwa ngaphambi kokuba asweleke, uNel wayebiza udadewabo uJules, kodwa akazange amhoye. UNel ubhubha kwinto ekufanele ukuba ukuzibulala ngokutsiba umlambo. UJules uza kubuyela edolophini encinci apho wachitha ihlobo ebuntwaneni bakhe ukuze anyamekele intombi ekwishumi elivisayo eyashiywa ngudade wabo. Kodwa uJules woyika, ngakumbi amanzi.
Ingelosi -USandrone Dazieri
Kwaye i-Italiya nayo iyabuya USandrone Dazieri emva kwempumelelo yamazwe aphesheya AWUKHO wedwa. Abaphandi abathile UColomba Caselli y UDante Torre ngoku bazinikezele ku ulwaphulo-mthetho Wonke umntu uyawuqonda umsebenzi weNkosi ubunqolobi. UDante uyaqhubeka nemanias kunye ne-phobias yakhe kwaye aqale ukubonisa iimpawu zoxinzelelo olomeleleyo. Kwaye uColomba uyaqhubeka nomsindo wakhe ongalawulekiyo kwaye urhoxile emzimbeni. Kodwa xa zizonke zenza i ngaphezu kweqela elifanelekileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli emnyama » Iincwadana ezi-7 zenoveli yolwaphulo-mthetho ezilinde ihlobo
UAdrián Villagra Vicens sitsho
Ndicinga ukuba indlela yokusebenza kufuneka icace gca ukuze ufumane incwadi oyifunayo.
Phendula kuAdrián Villagra Vicens
UJuan Goytisolo usweleke izolo eneminyaka engama-86
Uncwadi lwaseAfrika: Yonke into iyawa ngaphandle, nguChinua Achebe